Faminavinana Momba ny Hoavy: Nisy ny Marina fa Betsaka ny Diso
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Luo Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mooré Myama Ngabere Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tseky Tshiluba Tsonga Twi Umbundu Vietnamianina Wayuunaiki Xhosa Yorobà Zandé Zoloa Éwé
MATOAN-DAHATSORATRA | MISY MAHAY MAMANTATRA NY HOAVY VE?
Nisy ny Marina fa Betsaka ny Diso
Te hahalala ny hoavinao ve ianao? Be dia be ny hoatr’izany. Maro no maminavina ny hoavy, saingy samy hafa ny zavatra hitany. Diniho ireto:
MPAHAY SIANSA: Mandany vola be sy mampiasa fitaovana arifomba izy ireo mba hamantarana izay hitranga amin’ny hoavy. Vinavinainy, ohatra, ny ho vokatry ny fandotoana tontolo iainana, sy izay mety ho toetry ny andro rahampitso.
MPIKAROKA MATIHANINA: Mandinika ny fizotran’ny fandraharahana sy ny toe-draharaha ara-politika izy ireo. Antsoin’ny olona hoe mpaminany, ohatra, i Warren Buffett, ilay anisan’ny mpanankarena indrindra eto an-tany. Marina foana mantsy izay lazainy ka tsy matiantoka mihitsy izy. Antontan’isa kosa no ampiasain’i Nate Silver mba haminavinana ny toe-draharaha ara-politika any Etazonia, eny fa na dia izay hahazo loka amin’ny famoahana filma any Hollywood aza.
ASA SORATRA FAHINY: Nolazaina fa faminaniana izy ireny. Hitan’ny olona sasany hoe tanteraka ankehitriny, ohatra, ny asa soratr’i Nostradamus, izay niaina tamin’ny taonjato faha-16. Nolazain’ny olona fa fambara loza koa ny kalandrien’ny Maya, satria nifarana tamin’ny 21 Desambra 2012.
MPITONDRA FIVAVAHANA: Milaza izy ireo indraindray hoe hisy loza lehibe hitranga eran-tany. Te hampitandrina ny olona mantsy izy ireo sady te hampitombo ny ondriny. Naelin’i Harold Camping sy ny mpanara-dia azy, ohatra, fa ho potika ny tany ny taona 2011. Tsy tanteraka akory anefa izany.
MPANANDRO: Mihambo ho mahay mamantatra ny hoavy izy ireny. Nisy marina ny faminaniana nolazain’i Edgar Cayce sy Jeane Dixon momba ny taonjato faha-20. Betsaka koa anefa no diso. Naminany, ohatra, i Dixon fa hipoaka ny Ady Lehibe III ny taona 1958. I Cayce indray nilaza hoe hivarina any an-dranomasina i New York ny taona 1975.
Misy fomba azo antoka hamantarana ny hoavy ve? Tena tsara ho fantatra izany. Mety ho hafa kokoa mantsy ny fiainanao raha fantatrao izany.
Mey 2014 | Misy Mahay Mamantatra ny Hoavy Ve?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Mey 2014 | Misy Mahay Mamantatra ny Hoavy Ve?